Ucwaningo olusha lufakazela ukusetshenziswa okubanzi kwe-pumice powder embonini kakhonkolo.
I-Pumice ingasebenza njengosimende kukhonkolo futhi abacwaningi babonise ukuthi ukhonkolo owenziwe nge-pumice powder ofika ku-50% ungathuthukisa kakhulu ukuqina kodwa unciphise ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kanye nokusetshenziswa kukaphethiloli.
I-Pumice Yokunakekelwa Komuntu Siqu
Ama-soap bars we-pumice
Kuyimpahla eqhumayo engasetshenziswa njengempuphu noma njengetshe ukususa izinwele noma isikhumba esingafuneki.
EGibhithe lasendulo ukunakekelwa kwesikhumba nobuhle kwakubalulekile futhi izimonyo kanye nama-moisturizers ayesetshenziswa kakhulu. Omunye umkhuba owawuvamile kwakuwukukhipha zonke izinwele emzimbeni kusetshenziswa okhilimu, izinsingo namatshe epumice.
I-Pumice esesimweni esiyimpushana yayiyisithako emithi yokuxubha eRoma lasendulo.
Ukunakekelwa kwezinzipho kwakubaluleke kakhulu eShayina yasendulo; izinzipho zazigcinwa zilungiswe ngamatshe e-pumice, futhi amatshe e-pumice nawo ayesetshenziselwa ukususa ama-calluses.
Kwatholakala enkondlweni yamaRoma ukuthi i-pumice yayisetshenziselwa ukususa isikhumba esifile kusukela ngo-100 BC, futhi cishe ngaphambi kwalokho.
Namuhla, eziningi zalezi zindlela zisasetshenziswa; i-pumice isetshenziswa kakhulu njenge-exfoliant yesikhumba. Noma izindlela zokususa izinwele sezishintshile emakhulwini eminyaka edlule, izinto ezihuquzelayo njengamatshe epumice nazo zisasetshenziswa.
“Amatshe e-Pumice” avame ukusetshenziswa kuma-salon ubuhle ngesikhathi senqubo ye-pedicure ukususa isikhumba esomile nesidlulele kusukela phansi konyawo kanye nama-calluses.
I-pumice egayiwe kahle yengezwe kwezinye izixuku zokuxubha njengepholishi, efana nokusetshenziswa kwamaRoma, futhi isusa kalula ukwakheka koqweqwe lwamazinyo. I-toothpaste enjalo iyaluma kakhulu ukuthi isetshenziswe nsuku zonke.
I-Pumice iphinde yengezwe kuzihlanzi zezandla ezisindayo (njengensipho ye-lava) njenge-abrasive emnene.
Ibha yetshe le-pumice eliqinile
Itshe le-pumice, ngezinye izikhathi elixhunywe esibanjeni, liyithuluzi eliphumelelayo lokukhuhla ukuze kususwe i-limescale, ukugqwala, izindandatho zamanzi aqinile, namanye amabala ezintweni zobumba ezindlini (isb., izindlu zangasese).
Kuyindlela esheshayo uma kuqhathaniswa nezinye izindlela ezifana namakhemikhali noma uviniga nesoda yokubhaka noma i-borax.
I-Pumice Yomuthi Wakuqala
I-Pumice isetshenziswe embonini yezokwelapha iminyaka engaphezu kuka-2000. Umuthi wasendulo waseShayina wawusebenzisa i-pumice yomhlabathi kanye ne-ground mica kanye namathambo amathambo afakwe etiyeni. Leli tiye lalisetshenziselwa ukwelapha isiyezi, isicanucanu, ukuqwasha, nokuphazamiseka kokukhathazeka. Ukungeniswa kwalawa matshe agayiwe empeleni akwazile ukuthambisa amaqhuqhuva futhi kamuva kwasetshenziswa nezinye izithako zemithi ukwelapha umdlavuza wenyongo kanye nobunzima bomchamo.
Emithi yaseNtshonalanga, ekuqaleni kwekhulu le-18, i-pumice yayigaywe yaba ukufana koshukela futhi nezinye izithako yayisetshenziselwa ukwelapha izilonda esikhumbeni kanye ne-cornea.
Imixube enjengalena nayo yayisetshenziselwa ukusiza isibazi sezilonda ngendlela enempilo. Cishe ngo-1680 kwaphawulwa isazi semvelo saseNgilandi ukuthi i-pumice powder yayisetshenziselwa ukukhuthaza ukuthimula.
Next post: Εξαγωγέας ελαφρόπετρας